Maitiro eCoronary Virus kubuda angatarisirwa sei Kuenderera | RayHaber | raillynews
mushaGENERALKo Coronavirus Kubuda kunotarisirwa kuenderera sei?
Denda re coronavirus rinotarisirwa kuenderera sei?
Ruzhinji rwerufu vanhu vanopfuura makore makumi matanhatu neshanu kana vanhu vane kushomekana kwemutumbi. "Vanhu vane chirwere chisingaperi chechirwere cheshuga, chirwere cheshuga, mamwe matambudziko echirume, chemotherapy kana kumwe kudzivirirwa kwemuviri nevamwe vanoshandisa zvinodhaka vari panjodzi huru. Vanhu ava vanofanira kungwarira sezvinobvira. ”
Kunyangwe huwandu hwehuwandu hwekufa hwakadzikira, hatifanire kuramba tichivimba neiyi nzira. “Utachiona hunogona kushanduka kubva kumunhu kuenda pane chero nguva, hunowedzera chero nguva, huchityisa chimiro chemunhu, saka hazviite. Denda rinogona kukura uye huwandu hwevanhu vanofa hunowanda. ”
Kuchenjerera kunofanira kutorwa kana uchibata vatsva kubva kuChina, asi isu tinofanira kuziva kuti havasi vese veChinese vane hutachiona, kunyanya avo vasina kuenda kuChina kwenguva yakareba.
ICHI CHII CHINANGWA CHEMAOKO?
Iko hakuna mishonga iyo yakaratidzwa kuve inoshanda kune coronaviruses nhasi. Nechikonzero ichi, kurapwa kunopihwa varwere kuti vadzose zvichemo zvavo uye nekutsigira mitezo yemitezo yemitezo, kana paine. Vanhu vakafambira pachavo kuenda kana kushanya kuChina mumazuva gumi nematatu apfuura munyika yedu vanofanirwa kunyatsobvunza nzvimbo iri pedyo yekuchengetedza hutano kana vaine zviratidzo zvakaita sefivha, kukosora, uye kutadza kufema.
Ndedzipi nzira DZVO DZOKUDZIVIRIRA VIRUSI?
Varwere vanoonekwa vaine coronavirus vanogona kutapurirana kana isu tava kupfuura metita imwe. Vanhu vanorwara havafanirwe kuswededzwa zvakanyanya sezvazvinogona. Kuti udzivise izvi, vanhu vanorwara havafanire kuenda munharaunda zvakanyanya sezvinobvira, asi vanofanira kupfeka mask kana vachifanira.
Kubata maoko kwakawanda uye mapundu kunofanira kudzivirirwa.
KUSVIRA ZVESU ZVINOKUDZWA NEZV kunze Zvechokwadi
Kana isu tichikosora kana kutsvedza, kana tisina ruoko neoko, tinofanirwa kutsvedza kana kukosora mumaoko edu. Iyi nzira yekudzivirira kwete chete kune coronavirus, asiwo kune mamwe kutonhora uye flu.
Kuchena kwemaoko kwakakosha. Tinofanirwa kushambidza maoko edu nekukurumidza kana tasvika kumba kubva kunze. Iine sipo yakawanda uye mvura sezvazvinogona, zvinodikanwa kushambidza pakati peminwe, chikamu chepamusoro cheruoko, chanza, chobva chaoma. Haisi kungo famba nemvura.
Tinofanirwa kuve nema disinfectants emaoko asingade mvura isu tiri kunze masikati. Izvo zvinobatsira kushandisa ma disinfectants kana tapedza basa redu tichitenga mumusika tichifamba munzira yepasi, mabhasi.
MISANGANO MUZVINHU ZVEMHARA
Inofanirwa kuve inofema kazhinji.
Kutarisirwa kunofanirwa kubhadharwa pakuchenesa kumeso. Kana ikabviswa kaviri pazuva, nhamba iyi inofanira kupetwa. Izvi zvinoenda kuimba.
Ma sanitizer emaoko anofanirwa kuwanikwa munzvimbo idzi.
UNOFANIRA kuenda kuHOSPITALI IZVO
Kunze kwezviratidzo zvefuru uye furu, vanhu vadiki vasina chero chirwere vanofanirwa kuenda kuna chiremba kana vapfupika.
Avo vanogamuchira cancer, chirwere cheitsvo, kutapurirana kwemoyo, uye kudzvinyirira immune system vanofanirwa kuenda kuchipatara nekukurumidza, kunyangwe vaine zviratidzo zvefuruwenza.
Ilgazda Ski Season inotarisira Kuenderera kusvikira pakupera kwaMarch
70 vanhu vane zviuru zvinotarisirwa kufamba neYHT
New capital City Project TCDD's Gulermak-Kolin Vakavakira mubatanidzwa…
Tender ziviso: Dhindaina yeRinomotive Injini Crankshafts Kuchengetedzwa Kuteedzera uye…
Bazi Transportation kuti kushandiswa pevhu uye njanji wemuTesitamende Turkey ...
Nhasi muNhoroondo: 4 March 1873 Hirschin kambani mukuputsa chibvumirano
Nhasi muNhoroondo: 4 March 1873 Hirsch pane zvinopesana nechibvumirano ...
Kubuda kweCoronavirus Kunokanganisa Nhamba yeVanodarika kuMarmaray
IMM Yakabatsira Kuzivisa Chiitiko Kupesana neCoronavirus Kubuda
Coronavirus Kuputika Kunotyora Supply Chains!
Mutungamiri Şahin Anoongorora zviito Zvinotorwa Kupokana neCoronary Virus kubuda